Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Ofufe -> Chọọchị
 Jisọs zara ya sị, “Nwanyị, gee ntị ka m gwa gị, oge na-abịa mgbe ọ naagaghị adị mkpa ebe anyị nọ kpọọ isi ala nye Chineke. Ma ọ bụ nꞌebe a ma ọ bụ na Jerusalem. Ihe dị mkpa abụghị ebe anyị nọ kpọọ isi ala nye Chineke. Kama ọ bụ otu anyị siri kpọọ isi ala. Anyị na-esite nꞌime obi anyị kpọọ isi ala? Anyị na-akpọ isi ala site nꞌinyeaka nke Mmụọ Nsọ? Chineke bụ mmụọ. Anyị apụkwaghị ịkpọ isi ala nye ya nꞌụzọ ziri ezi ma ọ bụghị site nꞌinyeaka ya. Nke a bụ ụdị ịkpọ isi ala Chineke chọrọ site nꞌaka anyị. Unu bụ ndị Sameria maara ntakịrị banyere nke a. Unu na-akpọ isi ala nꞌisi. Anyị ndị Juu maara ihe nile banyere ya nꞌihi na nzọpụta rutere ụwa site nꞌaka ndị Juu!” *** ***
 Nke ọ bụla nꞌime ihe e kere eke ndị a nwere nku isii. Nku dị nꞌetiti nku ndị a nwere anyị hiri nne. Ehihie nile na abalị nile ọrụ ha bụ iti mkpu na-asị, “Nsọ, Nsọ, Nsọ, ka Onyenwe anyị Chineke pụrụ ime ihe nile dị. Bụ onye ahụ dịrị nꞌoge gara aga, onye dị ugbu a, na onye ga-adị ruo mgbe nile ebighị ebi.” Mgbe ihe e kere eke anọ ndị ahụ malitere inye onye ahụ na-anọkwasị nꞌelu ocheeze ahụ na-adị ndụ ruo mgbe nile ebighị ebi otuto nile, na nsọpụrụ nile, na ekele nile, iri ndị okenye abụọ na anọ ahụ na-adakwa nꞌala nꞌihu ya na-efe ya ofufe, bụ onye ahụ na-adịgide ruo mgbe nile ebighị ebi. Ha nile nꞌotu nꞌotu na-atụda okpu eze ha nꞌihu ya na-abụ abụ na-asị, “Ọ bụ nanị gị Onyenwe anyị na Chineke anyị kwesịrị ịnara otuto, na nsọpụrụ, na ike. Nꞌihi na ọ bụ gị kere ihe nile, ọ bụkwa site nꞌọchịchọ gị ka e ji kee ha, ma meekwa ka ha dịrị ndụ.”
 Chineke kwadoro inye anyị alaeze nke ihe ọ bụla na-apụghị ịgbanwe. Ka anyị na-ele anya mgbe nke a ga-emezu. Ka anyị jiri obi ekele na-ejere Chineke ozi. Ka anyị fee ya ofufe nꞌụzọ ọ ga-anabata. Ka anyị jiri egwu na nsọpụrụ fee ya ofufe. Nꞌihi na Chineke anyị dị ka ọkụ na-ere ọzara. Ọ na-erepịa ndị nile na-adịghị eme ihe ọ na-achọ.